Nabiga Daniel ee Report - # 504
Ku soo dhawoow Report Nabiga Daniel ee. Tani waa warbixin # 504. Magacaygu waa Daniel Whyte III halkan inaan idin xusuusiyo in Ciise Masiix ugu soo laabtay dhakhsaha badan iyo in aad u baahan tahay in loo diyaar garoobo. Warbaahinta Tani ma aha oo ku saabsan saadaasha, mana aha oo ku saabsan dejinta taariikhaha sida qaar ka mid ah nacasnimo ku samaysay, si kastaba ha ahaatee waa dhan oo ku saabsan diyaarinta.
Marka hore, maanta, bal aynu eegno qaar ka mid ah Calaamadaha imaatinkiisa in warka.
Xertiisii ​​waxay ku Ciise wax ka weyddiiyey ee Matthew 24: 3, "Maxaa calaamad ii noqon doona of imaatinkaaga iyo dhammaadka wakhtiga dunidu?" Ciise Masiix ayaa markaasi ka dib iyaga (oo noo) siin Aayaadkanaga oo Cad Cad in na tusi marka aan bilaabi karaan in ay rajaynayaan in ay arkaan oo kale ayaa imaatinka Rabbigeenna iyo dhammaadka wakhtiga dunidu ka. Calaamadaha waxaa ka mid ah:
1. muuqaalka Masiixyo been ah iyo nebiyo been ah
2. dagaallo iyo dagaallo hadalhayntood
4. cudurro (cudurrada faafa dilaa ah)
5. dhulgariir meelo kala duwan (kala duwan)
6. korodhay cadaadis ah oo mu'min ah
7. Injiil lagu wacdiyey adduunka oo dhan
8. calaamooyin iyo yaabab waaweyn ku Sugan Samooyinka (lug qorraxda, dayaxa, xiddigaha, iyo dhaqdhaqaaqa dhulkooda)
9. dhib iyo guuxa ka mid ah dadka
10. kor u kacay rabshado "sidii wakhtigii Nuux"
11. korodhay khaniisnimada iyo sinada "maadaama ay ahayd in maalmihii Luud"
12. kaca ee "Yaajuuj iyo Maajuuj" (oo culimada Bible badan aaminsan yihiin waxaa loola jeedaa Russia)
13. kaca ee ee "boqorradii reer bari" (oo culimada Bible badan aaminsan yihiin waxaa loola jeedaa Shiinaha)
14. kordhi Cilmi (sayniska iyo farsamada)
15. khaa'imiin ee kaniisadda
16. xiisaha dowlad adduunka midaysan si loo helo nabad caalami ah
17. xiiso u dhiska ee Macbadka ku yaalla Yeruusaalem
Kitaabka Quduuska ah ayaa sidoo kale ku hadla ee calaamooyin kale oo kaas oo noqon doona cad ee "wakhtiyo dhib badan" in Labaad Timothy 3. calaamadaha waa kuwa dadka iyagoo:
19. lacag jeclayn
21 Kuwa kibirka badanu
23. waalidkood caasi ku ah
24. mahad naqin
26. jacayl lahayn
29. iscelin karin
31. quudhsadow kuwa wanaagsan
33. haad ah
35. kuwa raaxaysi jecel intii ay Ilaah jeclaan
36. haystaan ​​u-ekaanta cibaadaysiga, laakiinse xooggiisay diidaan oo dhanba.
Calaamadaha kale ee wakhtiyada taas oo laga soo dheegay Kitaabka waxaa ka mid ah:
37. xukunno ku jees jeesa soo laabashada Masiixa
38. dhaqdhaqaaqa xagga diinta ah mid dunida
39. xilkani Ruuxa Quduuska ah
40. dillaacay ah hawlaha jinka iyo falimohoodii
41. dib loo unko Israa'iil
42. cadaawad Arab xagga Israa'iil
43. Dib-u-mideynta Europe
44. dhaqdhaqaaqa xagga dhaqaalaha ah mid dunida
Raadinta dhacdooyinka adduunka siku mid ah erayga Ilaah, bal aynu eegno qaar ka mid ah headlines ka wararka maanta in farta ku socda labaad ee Rabbi Ciise Masiix.
Marka hore, maanta, iyagoo hoos yaala qaybta Calaamada dagaallo iyo dagaallo hadalhayntood - Sida laga soo xigtay Associated Press, hogaamiyayaasha Al-ka kooxda Islamic State iyo al-Qaacida soo ururay guriga beer ku taal waqooyiga Suuriya isbuucii hore, waxaana la isku raacay qorshe si ay u joojiyaan dagaal midba midka kale iyo wada shaqayn ka qaadeen kooxda ay. Kaasi wada qalbi ah keeni kara dhibaatooyin cusub ee qorshaha Washington ee ka dhanka ah ISIS. Iyadoo Diyaaradaha ka ah ciidamada weerarka isbahaysiga Mareykanka ka hawada, maamulka Obama uu tirin on hubaynta "dhexdhexaad" kooxaha mucaaradka si ay u riixaan dib dhulka. Kuwii mucaaradka, horay loo arkaa xad tabarta daran ee jacburka, wajihi lahaa mucaaradka ilaa hadda xoog haddii ay laba kooxood oo ciidamada culus-garaacid hadda wada shaqaynaya.
Labaad, maanta, iyagoo hoos yaala qaybta Calaamada dagaallo iyo dagaallo hadalhayntood - Sida laga soo xigtay Associated Press, hogaamiyaha ciidamada Mareykanka u sheegay Congress on Thursday in Mareykanka uu texgelin doono Brøndby oo tiro suubban ee ciidamada Mareykanka si ay ula dagaalamaan ciidamada Ciraaq sida ay galaan hawlgallada waawayn ee ololaha ka dhanka ah Xarakada Islamic State. Army Gen. Martin Dempsey, oo madax ka ah Taliyeyaasha Wadajirka ah ee Shaqaalaha, ayaa sheegay in ciidamada Ciraaq ay qabanayaan shaqo fiican, laakiin waxa uu sheegay in dadaal lagu doonayo in guurto Mosul ama in la soo celiyo xuduudda la leh Suuriya u baahan tahay howl badan oo adag.
Saddexaad, maanta, iyagoo hoos yaala qaybta Aayad dagaallo iyo dagaallo hadalhayntood ah - Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, Moscow oo Kiev eedeeyay kasta oo kale oo Khamiis ah ku xad xabad joojin iyo Maraykanka Russia ka digay in West waxaa taqsiiraan dheeraad ah ay "kordheen military "dhibaatada Ukraine. Ukraine eedeeyay Russia ee ciidamada iyo hubka si ay uga caawiyaan mucaaradku ay kala ee bariga Ukraine bilaabayaan weerar cusub in khilaaf ah ay ku dhinteen in ka badan 4,000 oo qof. Russia Kiev ka digay in dib mid ka mid ah colaadaha soo horjeeda kala noqon lahaa ba'an u Ukraine.
Tan afraad, maanta, iyagoo hoos yaala qaybta calaamada dhulgariir meelo kala duwan - Sida laga soo xigtay USA Today, a magnitude-4.8 dhulgariir on Wednesday qeybo ka mid ah Kansas, Oklahoma, iyo Arkansas gariiray, oo ugu xooggan ee sideed ruxmanayaan in gilgishay gobolka seismically firfircoon ka badan 24-ka saac. Buuruhu way dhexdhexaad ah oo xooggan, taas oo ahayd xad-gacmeed ee 3.4 miles oo qoto dheer, ku dhuftay ilaa 30 mayl koonfur-galbeed ee Wichita xadka Oklahoma ah. Hadba baallo ayaa la dareemay in inta badan gobolka iyo meelo fog fog sida TULSA, OK, oo ku saabsan 170 mile. Qaar ka mid ah dadka deggan Arkansas ayaa sidoo kale sheegay ruxruxidda.
Fifth, maanta, iyagoo hoos yaala qaybta calaamada buuqooda reer binu Israa'iil & Bariga Dhexe - Sida laga soo xigtay Al Jazeera, Xoghayaha Arrimaha Dibada Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in tallaabooyinka ay ku heshiiyeen wadahadalo ee Amman in ay hoos u xiisado u dhexeeya Israel iyo Falastiin. Siinta faahfaahin yar, Kerry ayaa sheegay in ballan adag ayaa la sameeyey si ay u ilaaliyaan status quo meelaha quduuska ah ee degan Bariga Yeruusaalem, ka dib markii wadahadalo kula Israel Ra'iisal Wasaaraha Benjamin Netanyahu iyo Urdun ee King Abdullah II. Waxa uu sheegay in Israa'iil iyo Jordan, taas oo uu leeyahay xuquuqda Asluubta badan ee masjidka Al-Aqsa, ayaa sidoo kale isku raacay in ay qaadaan talaabooyin ay "de-bataan xaaladda" ee Yeruusaalem iyo "soo celiyo kalsoonida."
Kitaabku waxa uu leeyahay in Luke 21:25: "Oo waa calaamado ee qorraxda, iyo dayaxa, iyo xiddigaha; oo dhib dhulka quruumaha, welwelaan guuxa badda iyo hirarka aawadood."
Waxaad ka akhrisan kartaa sheekooyinka faahfaahsan oo dheeraad ah u hesho Imaatinka Labaad ee la xiriirta warka ku qoran shabakadda Imaatinka Labaad Herald.com
Hadda, waxaa la gaaray waqtigii Sheegidda Bootcamp.
Sheegidda Bootcamp waa halka aan la aasaasiga ah ee wax sii sheegidda, Imaatinka Labaad ee Masiixa, oo waxa dhici doona mustaqbalka, sida uu Kitaabka Quduuska ah ka qabtaan. Our halkan Ujeedadu ma aha in la sameeyo saadaalin laakiin si ay kaaga caawiyaan in aad is diyaariyeen fahmo sida wax u kala fur doonaan in times dhamaadka.
Our topic maanta waxaa cinwaan looga dhigay "Xaggee baynu hoggaamiyayasha (Part 7)?" Ka Dr. Ed Hindson ee buugga "Muujintii: furo mustaqbalka".
Isbadalka Fasiraadda Muujintii ayaa waxaa ka mid ahaa:
1. Aragti preterist. View Tani arkaa buugga oo dhan, yar laga reebo, sida la dhammays tiray ee la soo dhaafay - ku AD qarnigii shanaad dhiciddii Yeruusaalem iyo cadaadis kiniisadda by Boqortooyada Roomaanka. Waxa ay u ogolaataa lahayn fulinta mustaqbalka dhabta ah ee ka mid ah xukummadii (shaabadood, iyo turumbooyin, iyo maddiibadihii).
2. Aragtida historicist. View wuxuu eegayaa oofinta waxsii sheegyada, kuwaas oo dhan taariikhda kaniisadda. Tani waxa ay keentay in wararka la isla dhexmarayo aan dhamaadka lahayn in gebi ahaanba waa iyada oo aan taageero Kitaabka Qudduuska ah. Identifications ayaa waxaa ka mid suufiyadoodii iyo friars sida "Ayax", Muhammad sida "star dhacday", Alaric Goth sida buunka ugu horeysay, Elizabeth aan maddiibadda hore, Martin Luther sidii malaa'igtii Sardis, Adolf Hitler sida faraska casaan, ad infinitum.
3. aragtida ayaa ku salaysan. View Tani turjumeysa dajiyay sidii taxane ah oo mabda 'ku haboon la xidhiidha halganka khayr iyo shar kala. Waxaa allegorizes buugga oo dhan sida khilaafka xagga ruuxa ah ku laheyn dhacdooyinka taariikhiga ah ee dhabta ah. The "dhib" ka mid noqonayaa ee colaadaha gudaha. The "laabashada Masiixa" meel ka mid ah oo qalbigooda wax maskaxdaada. Waxaa u arka wax sii sheegidda oo sida wax aan jirin, in la yidhaahdo oo ku saabsan dhacdooyinka mustaqbalka dhabta ah, isagoo.
Robert L. Thomas koobayaa uu difaaca aragtida mustaqbalka ka tan dhawrid ku duugi: "Xiriirka mustaqbalka ka kitaab waa mid ka mid ah oo kaliya in deeq aqoonsi ku filan in ay style kuwii nebiyada ee kitaabka iyo hannaanka caadiga ah leeyahay haan Fasiraadda ku salaysan style in. Waxaa u arka buugga sida diiradda muddo la soo dhaafay (s) of taariikhda dunida iyo muujinaya dhacdooyinka kala duwan iyo xidhiidhada ay midba midka kale. Tani waa aragtida ah in sida ugu wanaagsan ee la mabda'a fasiraadda suugaan. "
Apocalypse ayaa shaaca ka qaaday mustaqbalka. Waa Road Map Ilaah si ay nooga caawiyaan inay fahmaan meesha taariikhda aadanaha ka socda. Xaqiiqada ah in ay ku fiiqay in wakhtiga ugu dambaysta ah waa mid cad oo dhan buugga oo dhan. Wuxu u adeegaa Kaamilnimadu kama dambaysta ah ee soo dajinta Kitaabka Qudduuska ah. Waxaa nagu qaadataa ka qarnigii ugu horeeyay ee qarnigii la soo dhaafay, isagoo ka baxsanayo cadaadis inay ku guulaystaan, ka Church la halgamayaan inay aroosadda oo ah Masiixa, ka Batmos inay janno.
Apocalypse ayaa ugu baaqay epilogue ee riwaayadaha soo shaacbaxaysa ee madaxfurashada. In rikoorka kitaabiga ah, taariikhda aadanaha bilaabmaa beer iyo dhamaado magaalada weligeed ah. Waxaa bilaabmaa musiibo iyo dhamaado guul. Waxaa bilaabmaa nin ku guuldaraysatay kuna dhammaataa uu uuga. In dhexeeya, waxaa taagan, iskutallaabta ku qodob Oo cross in, Ciise Masiix Intii ay taariikhda aadanaha weligiis bedelay. Halleeluuya Waa maxay Badbaadiye!
Sayidow, diyaar, waxaan sii wadi doonaa eegaya this topic boggayaga warbaahinta / podcast soo socda.
In xiritaanka, aynu ka fiirso wixii Ilaah doonayo aniga iyo adiga inaad samayso iftiinka imaatinkiisa Labaad.
Ciise Masiix ayaa sheegay in Luke 19:13 in "Ku baayacmushtara ilaa aan soo noqdo." In light of in, waxa aanu sii naga taxane daraasad Bible ee buugaagta dadka Tesaloniika First & Labaad oo Bawlos wuxuu u qoray Mu'miniinta oo walaac ku saabsan Imaatinka Labaad ee Ciise Masiix, iyo wixii ay tahay in ay sameeyaan sida ay u adeegi jirtay. Qaybtani waxay cinwaan looga dhigay "Masiirka ee dhulka (Qaybta 3)" buugga "sugitaanka ee Imaatinka Labaad ee" by Ray C. Stedman.
Inta lagu jiro mudada in dahsoon waqti Ciise ka dib markii uu ka soo sara kacay kuwii dhintay iyo u muuqday xertiisii, ka dibna la waayay mar kale, waxay ku yidhaahdeen, "Sayidow, waxaad tahay waqtigan ka socda si loo soo celiyo boqortooyada Israa'iil?" Si kale haddii loo dhigo, waxay weydiinayeen, "Ma tahay waqtigii marka aad siin doonaa, saadaasha nebiyada ahaa ah in reer binu Israa'iil u noqon doonaa madaxa quruumaha ah iyo Masiixa boqor u ahaan doonaa shaqsi ahaan dhulka?"
Wuxuu ugu jawaabay cajiib ah in ay su'aal ahayd: ". Ma aha inaad ogaataan wakhtiyada iyo taariikhaha [weedh la mid ah loo isticmaalo in dadka Tesaloniika] Aabbuhu amarkiisa kaga dhigay ee uu awood gaar ah" si kale loo dhigo, Aabbaha keliya maahee ogaa jawaabta ay . su'aal Markaasaa Ciise ku tageen inay soo koobayaan barnaamijka oo saamayn doona: "Laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska ah idinku yimaadda; oo waxaad noqon doontaa markhaati oo Yeruusaalem, iyo Yahuudiya oo dhan, iyo Samaariya, iyo meesha dunida ugu fog. "
Haddii Rabbigu tarries imaatinkiisa oo aan ku noolahay, waxaan sii wadi doonaa eegaya mawduuc kale annaga warbaahinta / podcast soo socda.
SALAADDA ku dhow
Xusuusta erayadii Rabbiga ee Matthew 24:42: "Haddaba soo jeeda, waayo, ma aad ogidin maalinta Rabbigiinnu imanayo." Matthew 24:44 sheegay, "Idinkuna diyaar sidoo kale baad ahaan:. Waayo, saacad aydnaan u malaynaynin ayaa Wiilka Aadanahu imanayaa"
Haddii aadan diyaar u yihiin soo laabashada Ciise Masiix, waxaan kugu talin karaa si aad u hesho maanta diyaar isaga oo sida Badbaadiyahaaga. John 3:16 sheegay, "Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay Wiilka, in ku alla kii isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah." Just aad qalbiga ka rumaysatid in Ciise Masiix u dhintay dembiyadeenna aad, oo waxaa lagu aasay, oo dhintay ka soo sara xoogga Ilaah idiin si aad u waari isaga la noolaan karaan. U soo ducee oo aad weydiisato inuu qalbigaaga soo galay maanta, oo uu doono. Romans 10:13 sheegay, "Waayo, ku alla kii magaca Rabbiga ku dhawaaqaa, uu badbaadi doono yeedhi doonaan."
Ka dhig eegay waayo, madaxfurashadiinnu waa dhow dahay. Ha nagu soo biiraan Salaadda ee John Revelator ah - ". Sidaas oo kale, waxaa iman doona, Rabbi Ciise" Ilaah ha idiin barakeeyo.